Dowlada Mareykanka oo soo saartay war Soomaali badan oo dalkeeda kunool saameynaya. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Dowlada Mareykanka oo soo saartay war Soomaali badan oo dalkeeda kunool saameynaya.
Xoghayaha Amniga Gudaha ee Dowladda Maraykanka Alejandro N. Mayorkas ayaa ku dhowaaqay in dadka Soomaalida ah ee sharciga aan ku lahayn Maraykanka 18 bilood lagu kordhiyey waqtiga ay sii joogi karaan waddankaas.
Previous articleDaawo: Booliska- 40 qof ayaa magacyadooda lagu dirsaday lacag xawaalad oo aysan iyagu dirsan.
Next articleDaawo: qaabkan ayaad ku ogaan kartaa in magacaaga iyo aqoonsigaa lacag aadan dirsan lagu diray.